BancaNEO - HAL APP, DHAMMAAN LACAGTA
Bangiga dhabta ah ee casrigaaga
Bangiyada Dijital ah Ayaa La Sameeyay Mid Fudud
Iyadoo aan lahayn shuruudo dakhli ama deebaaji, BancaNEO waa xisaab bangi oo dhan. Hal akoon, hal kaadh, hal App.
Fur Account Personal
Bangiyada Shakhsi ahaaneed iyo Ganacsiga, ee Fartaada
Codso ganacsi ama akoon gaar ah
Maamul kaararka gudaha-abka, tuubada kaliya
Ma jiraan shuruudo dakhli ama dhigaal
Lacag gacanta geli
La soco lacagtaada oo dhan hal meel oo ka dhig kharash-bixintaada maalinlaha ah mid aan toos ahayn.
Nooc cusub oo bangi ah
Sahami awooda bangiyada ka fudud oo ka caqli badan onlayn.
Sarifka lacagaha degdega ah
Samee xisaab adoo noo sheegaya qofka aad tahay;
Ka soo deji app-ka Store Store ama Google Play Store;
Xaqiiji qofka aad tahay adiga oo duubaya muuqaal gaaban oo selfie ah oo sawir ka qaadaya aqoonsigaaga.
Si fiican u fahan lacagtaada aad isticmaalayso
Interface mobile dareen leh	Ku samee oo la soco howlahaaga maaliyadeed qasabadda fartaada, 24/7.
Lacagta badan ee IBAN	ku xidhan kaaga BancaNEO akoonku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si caalami ah ula macaamilato 38 lacag, adigoon u furin xisaabaad gaar ah mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Ammaan & Dhawaaq	Tilmaamaha amniga ee caqliga leh si aad lacagtaada u ilaaliso. Waxaan u hoggaansanahay heerarka amniga EMI ee ugu sarreeya si aan lacagtaada iyo xogtaada shakhsi ahaaneed u ilaalino.
Taageero saaxiibtinimo leh oo cajiib ah
Maya, Silicon Valley - dhiqlaha maaha astaamo. La xidhiidh arrin farsamo, nala wadaag ra'yi-celintaada ama na waydii meesha aan ugu jecelnahay qadada ee Miami. Waxaan joognaa halkan dhib malaha.
Dadku way ina jecel yihiin!
Eeg macaamiishayada sheekooyinka guusha
Aad baad ugu mahadsan tahay kooxda adeegga macaamiisha ee jooga BancaNEO Si aad habkan u fududaato!
Aad ayaan ula dhacay kaalmada ay bixiso adeegga macaamiisha ee BancaNEO!
Mar kasta oo aan su'aalo qabo ama aan u baahdo caawimo dheeraad ah, waxaan awoodaa inaan la xiriiro qof oo aan jawaab degdeg ah u helo. Waxaan lahaa waayo-aragnimo wanaagsan usbuucan oo waxaan doonayay inaan wadaago.
Unknown- Macmiil Farxad leh
Xaalufinta inta aad wax iibsaneyso!
Akoon kasta oo bangi oo furmay BancaNEO geed ku beero
Wax kala iibsi kasta u beddel ficil wanaagsan
Waxaan la shaqaynaa la-hawlgalayaasha hormoodka dhiraynta ee adduunka oo dhan
BancaNEO la shaqeeyaan Tree-Nation oo hoy u ah 90 mashruuc oo beeraley ah oo ka kala yimid 33 waddan oo kala duwan.
184 673 geed oo lagu beeray Kenya
42 336 geed oo laga beeray Madagascar
163 710 geed ayaa lagu beeray Burkina Faso
47 485 geed oo laga beeray Kolombiya
Ilaha si aan kula socodsiino
akhri BancaNEO blog
ASXAABKEENA IYO IS DHEX-GELINTA
ILAA 40% CASHBACK
Ku biir NEO CIRCLE
Bilow safarkaaga xorriyadda dhaqaale maanta.
KU BIIR GOOBTA NEO HADA!